မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: အခွန်အများဆုံးပေးသော ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ခုတွင်စစ်တပ်၏ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် MEC တို့မပါဟုသိရ
အခွန်အများဆုံးပေးသော ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ခုတွင်စစ်တပ်၏ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် MEC တို့မပါဟုသိရ
ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အခွန်ထမ်းစာရင်းမှ အခွန်အရပ်ရပ်အတွက် အများဆုံး ပေးဆောင်သည့် ထိပ်ဆုံးအခွန်ထမ်း ၁၀၀ ဦး စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်အခွန်အရပ်ရပ်မှ ကျပ်ဘီလျံ ၁၀၀၀ကျော်သာ ရှိနေ
Sunday, 26 February 2012 11:11
ယခု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် အခွန်အရပ်ရပ် ပေးသွင်းသူများထဲမှ အများဆုံး ပေးသွင်းသည့် ထိပ်ဆုံးအခွန်ထမ်း ၁၀၀ ဦးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်က ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ၁၀ ဦး၊ အမြတ်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ၁၀ ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးတွင် ၀င်ငွေ ခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုအား အသီးသီး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်တဲ့ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦးပဲ အရင်က ထုတ်ပြန်ဖူးတယ်။ အခုနှစ်ကုန်ရင်တော့ ၁၀၀ ဦးအထိ ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိတယ်။ သတင်းစာထဲမှာတောင် ထည့်ကြေညာဖို့ အထိ လောလောဆယ် စီစဉ်ထားတယ်”ဟု ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အခွန်ထမ်းစာရင်း မှ ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ ဦးအား စိစစ်ရမည်ဖြစ်၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလရောက်ရှိမှသာ ထုတ်ပြန်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်နှစ်က ထိပ်ဆုံးအခွန်ထမ်း ၁၀ ဦးစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ရာတွင် ၀င်ငွေခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သည့် ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦး၌ ဘဏ်နှင့်အရက်၊ စီး ကရက်၊ စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီများသာ ပါဝင်ကြောင်း၊ အမြတ်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များမှာ ငါး၊ လှေလုပ်ငန်းရှင်များသာ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများထဲတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက် ထုတ်သည့် ကုမ္ပဏီများသာ အများဆုံး ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်က မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး အခွန်အရပ်ရပ် ပေးဆောင်မှုမှာ ကျပ်သန်း ၁၂၂၂၈၅၇ (၁၂၂၂ ဘီလျံကျော်)ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားချက်များအရ သိရသည်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ စည်းကြပ်နှစ်တွင် ၀င်ငွေခွန်အများဆုံး ပေးသွင်းခဲ့သော ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦး ကျပ်(သန်း)
၁။ KBZ Bank Ltd ၆၁၇၇ .၂၈၃
၂။ Myanmar Brewery Ltd ၃၅၅၃ .၅၀၅
၃။ Shew Me' Co.,Ltd ၃၁၄၇ .၄၇၁
၄။ Myanmar CP Live Stock Co.,Ltd ၃၀၀၀ .၀၀၀
၅။ CB Bank Ltd ၂၀၆၁ .၆၃၁
၆။ Dagon Brewery Co Ltd ၂၀၅၄ .၃၀၂
၇။ မြန်မာ့စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်လီမိတက် ၁၅၉၈ .၁၆၈
၈။ Diethelm & Co., Ltd ၁၃၀၈ .၃၆၃
၉။ Yathar Cho Industry Co.,Ltd ၁၃၀၈ .၁၉၆
၁၀။ International Beverages Trading Co.,Ltd ၁၂၇၅ .၁၄၀
စုစုပေါင်း ၂၅၄၈၄ .၀၅၉
၂၀၁၀-၂၀၁၁ စည်းကြပ်နှစ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံး ပေးသွင်းခဲ့သော ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦး ကျပ်(သန်း)
၁။ Myanmar Brewery Ltd ၆၈၄၂၇ .၈၅၁
၂။Dagon Brewery Co Ltd ၉၀၅၁ .၉၄၀
၃။ Myanmar Winery & Distillery Co.,Ltd ၇၂၃၅ .၀၀၀
၄။ Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte.Ltd ၃၇၀၄ .၃၂၄
၅။ Peace Myanmar Group Co.,Ltd ၂၉၀၇ .၂၆၁
၆။ Myanmar Ivanhoe Copper Co Ltd ၂၃၀၉ .၂၆၀
၇။ International Beverages Trading Co.,Ltd ၁၇၃၀ .၅၅၂
၈။ Diethelm & Co., Ltd ၁၂၄၇ .၂၈၅
၉။ ။ မူဆယ်ကိုးကန့် ကုမ္ပဏီ ၉၆၀ .၁၆၈
၁၀။ Yathar Cho Industry Co.,Ltd ၉၂၁ .၆၅၈
နှစ်အလိုက် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှု ပမာဏ ကျပ်(သန်း)
ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ထီခွန် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀င်ငွေခွန် အမြတ်ခွန် စုစုပေါင်း
၂၀၀၅-၀၆ ၂၂၆၄၈၁ ၈၇၆၇ ၅၁၂၆ ၁၄၄၄၀၂ ၆၃၁၈၈ ၄၄၇၉၆၄
၂၀၀၆-၀၇ ၃၁၉၂၁၃ ၁၂၇၉၈ ၆၁၂၅ ၂၆၀၀၈၀ ၇၈၅၂၆ ၆၇၆၇၄၂
၂၀၀၇-၀၈ ၃၈၄၅၉၇ ၁၃၉၀၄ ၁၁၄၈၃ ၃၃၄၁၄၀ ၉၄၁၃၃ ၈၃၈၂၅၇
၂၀၀၈-၀၉ ၄၁၄၇၆၄ ၁၇၂၉၃ ၁၅၀၄၈ ၄၀၅၁၁၄ ၁၀၃၀၉၆ ၉၅၅၃၁၅
၂၀၀၉-၁၀ ၄၆၆၁၂၁ ၂၀၁၀၆ ၂၀၈၀၄ ၄၁၅၆၃၄ ၁၁၄၁၄၃ ၁၁၄၁၄၃
၂၀၁၀-၁၁ ၆၀၁၇၇၁ ၂၀၂၇၄ ၂၉၄၇၂ ၄၃၅၉၆၈ ၁၃၅၃၇၂ ၁၂၂၂၈၅၇
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:30 AM
MDC should do its homework first before declaring anything because the companies in the list such as Myanmar Brewery Ltd and Rothmans of Pallmall Myanmar are part of UMEHL and Dagon Brewery is part of MEC. As UMEHL isaholding company therealots of companies under it. Though it is true and obvious that Military monopolized Myanmar economy , we should be careful in our comments. Please learn more.